कोरोना संक्रमण बढीरहँदा दाङमा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव « Khoj Raftar
३ माघ,घोराही – कोरोनाको तेस्रो लहर शुरु भएर संक्रमित बढिरहँदा दाङमा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशकै एकमात्र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १० बेड आईसीयू, ५० बेड एचडीयू, ५ भेन्टिेलटर, ५ बेड एनआईसीयू र १० बेड पीआईसीयू छन् ।
कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहरको पूर्वतयारी स्वरुप प्रतिष्ठानमा आवश्यक पूर्वाधार थपिएको प्रतिष्ठानकी निर्देशक डा. प्रज्ञा बस्नेतले बताउनुभयो । तर अस्पतालमा अहिले स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्याप्त भएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र मेडिकल अफिसरहरुको अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्देशक बस्नेतका अनुसार प्रतिष्ठानमा फिजिसिएन डाक्टर दुई जना र एनेस्थेसिया डाक्टर एकमात्र जना छन् । त्यस्तै मेडिकल अफिसर र अन्य दक्ष स्वाथ्यकर्मी समेत अपुग रहेको उहाँले बताउनुभयो । केही दिन यता अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरु बढ्दै गइरहेका छन् ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा विगतमा अपुग रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधार अहिले थपिएका छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विनोद सिंहका अनुसार १५ बेड आईसीयू, १० बेड एचडीयू, १५/१५ बेड एनआईसीयू र पीआईसीयू र १२ वटा भेन्टिलेटर थप भएका छन् ।
पूर्वाधार भएपनि संक्रमण बढ्दै गए जनशक्ति नपुग्ने उहाँको भनाई छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेलझुण्डी कोभिड विशेष अस्पताललाई हाल राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड युनिटका रुपमा स्थानान्तरण गरिएको छ । कोभिड संक्रमित बिरामीलाई राख्न ६० बेड छुट्टाइएको डा. बिनोद सिंहले बताउनुभएको छ ।।